ရုရှ တု၍ ဘင်္ဂလား ခုန် အိုင်ပျက်ရုံ သာရှိလိမ့်မည်တည်း။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ရုရှ တု၍ ဘင်္ဂလား ခုန် အိုင်ပျက်ရုံ သာရှိလိမ့်မည်တည်း။
Posted by သုရှင် on Mar 23, 2014 in Critic |5comments
ပြည်တွင်းမှာ အိမ်ကြက်ချင်းအိုးမဲသုတ်နေတော့ ဘင်္ဂလားက ပွဲကြည့်ကုလားထိုင်မှာ မိန့်မိန့်ကြီး ကြည့်နေလေရဲ့။ ဒီအချိန်မှာ ဘင်္ဂလားတပ်တွေသာ မောင်တောကို ၀င်ကြည့်… အားလုံးကြက်သေသေ နေကြမှာ မြင်ယောင်မိသေးတယ်။
စစ်ရေးသတိရှိရမည်။ ဟူ၍ စစ်တပ်တိုင်းတွင် ဆိုင်းဘုတ်ချိတ် ထားသည်မှာ အလားကားဖြစ်နေပြီလော။ ရုရှ ကို တု၍ ဘင်္ဂလားက ” ဖားတု၍ ခရုခုန် ၊ အိုင်ပျက်ရုံသာရှိ ” တော့မပေါ့လေ။ုရုရှက ရုရှ ဖြစ်၍ ဘင်္ဂလားက ဘင်္ဂလား ကုလားဖြစ်သည်။ ယြူကရိန်းက ယူကရိန်းဖြစ်၍ မြန်မာကမြန်မာဖြစ်သည်။
စကားလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သွေးတိုး စမ်း၍ ရင်တွင်းက စကားတွေ ပွင့်ထွက်လာပေပြီ။ အမှန်တွင် သိပ်တော့လည်း အံ့သြစရာမဟုတ်ပါချေ။ ဘင်္ဂလားသည် ဘင်္ဂလားကုလားပင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်အမျိုးကို ချစ်ပေလိမ့်မည်ပေါ့။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ရခိုင်ပြည်ကိုပင်မဟုတ် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကိုပင် ဘင်္ဂလားကုလားက အလကားရလျှင် လိုချင်နေသည်မဟုတ်ပါလား။
ဘင်္ဂလီများကို ဘင်္ဂလားထဲ အ၀င်မခံခြင်း နောက်ကွယ်တွင် နယ်မြေချဲ့ထွင်လိုခြင်းက လည်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ပါနှင့်ပြီး ဖြစ်ပါသည်. နှစ်ဖက်စလုံးကလည်း ဒါကို သိသည်။ ထိုကြောင့် မြန်မာကို လက်ခံရန် တိုက်တွန်းသည့်အခါတိုင်း ဘူးတစ်လုံးဆောင် အိုတောင် မဆင်းရဲ လုပ်နေသည်ပေါ့။
မြန်မာတို့သည် ဘင်္ဂလားကို ဘယ်တုန်းကမှ အထင်မကြီးခဲ့သလို ကြောက်လည်းမကြောက်ခဲ့ပေ။ စစ်ဖြစ်ပြီဆိုလျှင်လည်း လူအင်အားထက် စစ်ရေးစွမ်းအင်ကသာအရေးပါသည်။ နည်းပညာကသာလျှင်အရေးပါသည်။ သတ္တိသွေးကသာလျှင်အရေးပါသည်။
ဆိုသည်ကို အစ္စရေးက မွတ်စလင်ကမ္ဘာကို သက်သေပြပြီးဖြစ်သည်။ အမျိုသားနေ့သည် စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာပါသည် ဆိုလျှင် ထိုစကားမှာ ” မြင်းခွါတစ်ချက်ပေါက်လျှင် မီးဟုန်းဟုန်းတောက် စေရမည် ” ဟူသောစကားပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
မြင်းခွါတစ်ချက်ပေါက်လျှင် မီးဟုန်းဟုန်းတောက်စေရမည်. . .
အဲဒီ စကားက သတ္တိသွေးတွေ ဆူပွက်စေသည်။
ကျနော်တော့ မီးခိုးလုံးများ ထွက်လာမလားလို့
(ဇာတ်ထဲက ဘီလူးလို)ဖနောင့် ပေါက်ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။
အေးအေး ဆေးဆေး နေပါရစေဗျာ။ စစ်ဆိုတာ ဘာအကြောင်းနဲ့ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်တာအကောင်းဆုံးဘဲ။ နဂိုတည်း ဆင်းရဲမွဲတေ နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ စစ်သာ ဖြစ်လို့ကတော့ တစ်တိုင်းပြည်လုံး တရုတ်ထိုးအပ်လိုက်ရမှာ။……
တခြားနည်း နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ တိုက်မှ ခိုက်မှ သတ္တိရှိတာ မဟုတ်၊ အမှန်ကို မြင်ပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်ကို လုပ်မှ….
pazflor ဆိုတဲ့နောင်တော်ရေ နောင်တော်ပြောတာ နောက်ကျနေပြီဗျ……။အခုချိန်မှာတော့ တရားမမြင် ဓားပဲမြင်နေကြတယ် (ဖွဘုတ်မှာ အများဆုံးလို့ပြောပါတယ်)
ကို သုရှင် ရေ ၊
ကို သုရှင် Post ထဲက တစ်ချို့ အချက်တွေကို ၊ ကျနော့်ရဲ့ ၊
” စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၇၁ ) ( တရားမျှတမှု အစစ်အမှန် ) ” မှာ ၊
နဲနဲ တို့ထိထားတယ်နော် ။ အားပေးပါအုံး ။
စိတ်ထိန်း ကိုရင် စိတ်ထိန်း။
မှားယွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရဲ့နောက်မှာ စတေးရမယ့် ဘ၀တွေ အသက်တွေ မိသားစုတွေ……. အများကြီးရှိတာမို့